05 Archives - Tameelay
June 5, 2020 by daddy
အဆိပ်ဆူး အရင်ကလူတစ်ကာအပေါ် ရိုးသားဖြူစင်ခဲ့တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ပါ။ ဖြူစင်ရိုးသားမူတွေကို ခုတုံးလုပ်ခံရဖန်များလာတော့ ယုံကြည်မူတွေပျောက်ဆုံးလို့ သံသယဆူးတွေထားတတ်လာတယ်။ အရင်ကလူတစ်ကာအပေါ် စေတနာထားလွန်းတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ပါ။ စေတနာတွေပိုမိတော့ ဝေဒနာတွေပဲရရလာတော့ ဥပေက္ခာဆူးတွေထားတတ်လာတယ်။ အရင်ကလူတစ်ကာအပေါ် သည်းခံတတ်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ပါ။ လည်ပင်းချည်း တက်နင်းခံရဖန်များလာတော့ မဟုတ်မခံတတ်တဲ့ မာနဆူးတွေထားတတ်လာတယ်။ အရင်ကလူတစ်ကာအပေါ် ရိုးသားဖြူစင်မူနဲ့နှလုံးသားက နူးညံ့တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ပေမယ့် လူတွေရဲ့အနိုင်ကျင့်,စော်ကားတာတွေ အထပ်ထပ်ကြုံရတာတွေများလာတော့ “ဆူး”တွေကရင်ထဲကို သူ့အလိုလိုရောက်လာခဲ့တယ်။ အဲဒီဆူးတွေက ရိုင်းစိုင်းမောက်မာ စော်ကားသူတွေအတွတ်ကတော့ အဆိပ်ဆူးတွေပဲဖြစ်နေမှာပါ။ Nan Khin May Win အဆိပ္​ဆူး အရင္​ကလူတစ္​ကာအ​ေပၚ ရ္​ုိးသားျဖဴစင္​ခဲ့တဲ့ မိန္​းမတစ္​​ေယာက္​ပါ။ ျဖဴစင္​႐ိုးသားမူ​ေတြကို ခုတံုးလုပ္​ခံရဖန္​မ်ားလာ​ေတာ့ ယံုၾကည္​မူ​ေတြ​ေပ်ာက္​ဆံုးလို႔ သံသယဆူး​ေတြထားတတ္​လာတယ္​။ အရင္​ကလူတစ္​ကာအ​ေပၚ ​ေစတနာထားလြန္​းတဲ့ မိန္​းမတစ္​​ေယာက္​ပါ။ ေစတနာ​ေတြပိုမိ​ေတာ့ ေဝဒနာ​ေတြပဲရရလာ​ေတာ့ ဥ​ေပကၡာဆူး​ေတြထားတတ္​လာတယ္​။ အရင္​ကလူတစ္​ကာအ​ေပၚ သည္​းခံတတ္​တဲ့မိန္​းမတစ္​​ေယာက္​ပါ။ လည္​ပင္​းခ်ည္​း တက္​နင္​းခံရဖန္​မ်ားလာ​ေတာ့ မဟုတ္​မခံတတ္​တဲ့ မာနဆူး​ေတြထားတတ္​လာတယ္​။ … Read more
Categories Tameelay Knowledge Tags 05, Nan Khin May Win
မိန္းကေလးအမ်ားစုက ဓမၼတာလာခ်ိန္မွာ နာက်င္ကိုက္ခဲမႈကိုခံစားရတာေၾကာင့္ လစဉ္ဒီအခ်ိန္ေရာက္မွာကိုေတာင္ ေၾကာက္ေနတတ္ၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေတြက ေဝဒနာအနည္းငယ္ပဲခံစားရေပမယ့္ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း မခံမရပ္နိုင္ေအာင္နာက်င္ကိုက္ခဲမႈမ်ိဳးကိုခံစားရတာပါ။ ဒီေတာ့ လစဉ္ကိုက္ခဲမႈေတြမျဖစ္ရေအာင္ အဲ့ဒီကိုက္ခဲမႈေတြျဖစ္ေစတဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြကိုသိျပီး ဆင္ျခင္ဖို႕လိုပါတယ္။ လစဉ္ဓမၼတာလာခ်ိန္ကိုက္ခဲမႈေတြကိုျဖစ္ေစတဲ့အေၾကာင္းရင္းေတြကေတာ့ ဒီအခ်က္ေတြပဲျဖစ္တာေၾကာင့္ ဆင္ျခင္နိုင္ဖို႕ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ (၁) အပင္ပန္းခံလြန္းျခင္း ေလ့က်င့္ခန္းျပင္းျပင္းထန္ထန္လုပ္တာ၊ အလုပ္လုပ္တဲ့အခါခဏနားတာမ်ိဳးမလုပ္ဘဲ ဆက္္တိုက္လုပ္ေနတာ၊ အရမ္းအေညာင္းမိေအာင္ထိုင္တာမ်ိဳးေတြက ခႏၶာကိုယ္ကိုထိခိုက္ေစျပီး မိန္းကေလးေတြမွာျဖစ္တတ္တဲ့ ဓမၼတာလာစဉ္နာက်င္ကိုက္ခဲမႈေတြကို ပိုဆိုးေစပါတယ္။ (၂) အိပ္ေရးမဝျခင္း အိပ္ေရးဝဝမအိပ္တဲ့အခါ ေဟာ္မုန္းေတြကိုေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေစျပီး ဓမၼတာစက္ဝန္းကို အေနွာက္အယွက္ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အိပ္ေရးမဝတာဆက္တိုက္ျဖစ္လာတဲ့အခါ နာက်င္ကိုက္ခဲမႈေတြကို ပိုဆိုးေစပါတယ္။ (၃) ဓာတုေဆးဝါးေတြနဲ႕ထိေတြ႕ျခင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္တဲ့သူေတြ၊ စက္ရံု၊အလုပ္ရံုေတြမွာ လုပ္တဲ့သူေတြက ပိုးသတ္ေဆး၊ေပါင္းသတ္ေဆးနဲ႕ တျခားေသာဓာတုေဆးဝါးေတြနဲ႕ အျမဲလိုလိုထိေတြ႕ေနရပါတယ္။ အဲ့ဒီလို ဓာတုေဆးေတြနဲ႕ ထိေတြ႕မႈရွိတာက ဓမၼတာလာစဉ္နာက်င္ကိုက္ခဲတာေတြြကို ပိုဆိုးေစပါတယ္။ (၄) စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားျခင္း စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားျပီး စိတ္ပင္ပန္းတာက ခႏၶာကိုယ္ပင္ပန္းသလိုပဲ … Read more
Categories General Knowledge Tags 05, pp
မိန်းမသားတို့ ရင်ဖွင့်ရာ Group မှာ လာရောက်ရင်ဖွင့်ထားတဲ့ သမီးလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ရင်ဖွင့်စာလေးတွေ မျှဝေခဲ့တာဆိုရင် အမှတ်စဉ်လေးတွေနဲ့ (၉) ထိပြီးခဲ့ပါပြီ . . . အခု အမှတ်စဉ် (၁၀) အနေနဲ့ သမီးလေးတစ်ယောက် ရင်ဖွင့်ထားတာကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော် . . . အမတို့ ညလေးတို့ အိမ်ထောင်တစ်ခုထူထောင်တော့မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်လိုမဖြစ်အောင် ပြောပြပါရစေ အရာရာကိုအလေးအနက်နဲ့ သေချာစဉ်စားဆုံးဖြတ်ကြးပါ ကျွန်တော်ကမန္တလေးကပါ အသက် 17မှာခိုးရာလိုက်ပြေးခဲ့တာပါရည်စားဦးလဲဖြစ် အချစ်ဆုံးလဲဖြစ်တော့ ဘာမှလဲမစဉ်စားတက်သေးဘူးပေါ့ ကျွန်တော်တို့က တစ်ရပ်ကွတ်ထဲ့မှာနေကြတာပါသူကကျွန်တော်ထက်အသက် 5နှစ်ကြော်ကြော်လောက်ကြီးပါတယ် ခိုးရာလိုက်ပြေးပီးတော့ ကျွန်တော်ကိုမိဘအိမ်ပြန်အပ်ခဲ့ပါတယ်1လပိုင်းမှာခိုးပြေးတယ်4လပိုင်းမှာမင်္ဂလာဆောင်ပေးမယ်ပြောသွားတာ ရပ်ကွက်လူကြီးတွေအားလုံး လက်မှတ်ထိုးပီးပြောသွားကြတာပါ မင်္ဂလာမဆောင်ခင်ကျွန်တော်မှာကိုယ့်ဝန်ရှိနေတော့ သူ့ကိုပြောပြတယ် သူ့ကလဲပျော်လို့ပေါ့ သူ့မိဘတွေကိုပြောပြတာ သူ့အဖေကပြောတယ် ခိုးရာလိုက်ပြေးတဲ့2 ရက်မှာ ကိုယ့်ဝန်ရှိတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ အာ့အချိန်မှာပြသာနာစတာပဲ သူ့ကကျွန်တော်စီကိုသိပ်မလာတော့ဘူးမင်္ဂလာဆောင်ကိစ္စမေးရင်လဲ နေ့ရွှေ့ ညရွှေ့နဲ့ … Read more
Categories Tameelay Knowledge Tags 05
မိန်းမသားတို့ ရင်ဖွင့်ရာ Group မှာ လာရောက်ရင်ဖွင့်ထားတဲ့ ရင်ဖွင့်စာ (၉)
မိန်းမသားတို့ ရင်ဖွင့်ရာ Group မှာ လာရောက်ရင်ဖွင့်ထားတဲ့ သမီးလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ရင်ဖွင့်စာလေးတွေ မျှဝေခဲ့တာဆိုရင် အမှတ်စဉ်လေးတွေနဲ့ (၈) ထိပြီးခဲ့ပါပြီ . . . အခု အမှတ်စဉ် (၉) အနေနဲ့ သမီးလေးတစ်ယောက် ရင်ဖွင့်ထားတာကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော် . . . ညီမအကြောင်းရင်ဖွင့်ပါရစေနော် ညီမချစ်သူက ညီမအပြင်နောက်ကောင်မလေးထားပါတယ် မသိအောင်ထားတာပေမယ့်မစုံစမ်းရပဲပေါ်လာတာချည်းပါပဲ သိရတိုင်းလူမသိစေပဲ၂ယောက်ပဲကြိတ်ဖြေရှင်းခဲ့ပါတယ် အဲ့ဒါကို သူက သူ့ကိုအပြစ်ပြောလို့ စိတ်ပျက်ပါတယ်တဲ့ညီမသိလိုက်ရတာ ၄ယောက်တောင်ရှိနေပါပီ ညီမမှာ သူ့အရင်ကလည်း ဘယ်ယောကျ်ားလေးနဲ့မှ မရိုးမသားမပတ်သက်သလိုသူနဲ့ချစ်သူ ဖြစ်ပီးတော့လည်း သူ့အပြင်ဘယ်သူမှမရှိပါဘူး သူနဲ့စကြိုက်ထဲက တစ်နိုင်ငံစီဖြစ်နေတာပါသူ မြန်မာပြည်ပြန်လာတော့လည်း တစ်မြို့စီနေနေရပေမယ့် ညီမဘက်က ဒီနေ့ထိ သူ့ပေါ်သစ္စာမပျက်ပါဘူးသူ့လုပ်ရပ်က တစ်ခါနှစ်ခါ မ ကလို့ပြောမိတဲ့သူက မှားသွားလားရှင့် ညီမဘက်က သူ့ပေါ် မဟုတ်တာလုပ်ဘူးရင် ဖြေသာပါသေးတယ် … Read more
COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း(၅-၅-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီ ၁။ (၅-၅-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ညနေပိုင်းတွင် အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) မှ ပထမအသုတ် စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့သော ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၉၄) ခုနှင့် ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနမှ စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့သော ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၀၆) ခု၊ စုစုပေါင်း (၂၀၀) ခုတွင် – COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု လူနာသစ် မတွေ့ရှိပါ။ ၂။ (၅-၅-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီအထိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် COVID-19 ရောဂါဓာတ်ခွဲ အတည်ပြုလူနာ (၁၆၁) ဦးရှိပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ၃။ ထိုသို့စစ်ဆေးမှုများတွင် (၅-၅-၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု လူနာဟောင်း (old confirmed case) များ၏ ဓာတ်ခွဲနမူနာများတွင် … Read more